माओवादीको बोल्ड निर्णय- सहमति तोडने तर कर्णालीको सत्ता कांग्रेसलाई नछोडने ! | Dainik News Nepal
माओवादीको बोल्ड निर्णय- सहमति तोडने तर कर्णालीको सत्ता कांग्रेसलाई नछोडने !
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
शनिबार सम्पन्न प्रदेश कार्यालयको विस्तारित बैठकले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
‘शुक्रबारदेखि शुरु भएको विस्तारित बैठक शनिबार सम्पन्न भएको छ, प्रदेश सरकारबारे सबैको साझा बुझाइ छ ।
यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ, प्रदेशमा स्थिायत्व कायम गर्दै पाँचै वर्ष यही सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने बेला गत वैशाख २ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी र तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह (हालको एकीकृत समाजवादी) बीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो ।
केन्द्रमा गठबन्धन दलबीच छुट्टै सहमति बनेर निर्देशन आए मात्रै सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए ।
‘अहिले गठबन्धनको सरकार छ, कर्णालीमा सहमति हुँदा केन्द्रमा गठबन्धन थिएन । गठबन्धन दलबीच केन्द्रमा जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भने ।
समझदारी विपरीत गए अर्को खेल शुरु हुन्छ: जीवन शाही
केन्द्रको निर्देशनले कर्णालीमा भएको सम्झौतालाई फरक नपार्ने उनको तर्क छ । ‘हिजो केन्द्रको निर्देशनमा हामीले समझदारी गरेको होइन ।
वैशाख २ गते मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रकाश ज्वाला र मबीच प्रदेशस्तरमै सहमति भएको थियो,’ नेता शाहीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले आएर केन्द्रले के भन्छ भनेर हुन्छ रु केन्द्रसँग हाम्रो सरोकारको विषय छैन ।’
कर्णाली प्रदेशनेकपा माओवादी केन्द्रमहेन्द्र बहादुर शाही